‘उपत्यकामा दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राखौं’ – Eshankharapur
मितिनी भन्दै अर्काकी श्रीमती घरमै ल्याएका श्रीमानले बि’चल्ली पारेर हिँडे(भिडियो)
दशै‌ं अफर, सस्तो मुल्यको पल्सर बाइक ( मूल्य सहित ) हेर्नुहोस् ।
भोलिदेखि जोर विजोर प्रणाली लागू गर्ने प्रशासनको निर्णय, पसल खोल्न पनि समय तोक्यो (सूचनासहित)
आवतजावतमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने : सवारी चलाउन नपाइने, सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द रहने !
हृद’यघा त हुनु भन्दा एक महिना अघि शरीरले दिन थाल्छ यस्ता सं’केत
फेरि आयो यस्तो निर्णय: सबै प्रकारका व्यापार तथा व्यवसाय बन्द गर्ने, यातायात पनि नचल्ने !
हास्य कलाकार सन्तोष पन्तसंग भाइरल पुण्य गौतमको घम्सा घम्सी (भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/‘उपत्यकामा दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राखौं’
‘उपत्यकामा दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राखौं’
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकाका एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपत्यकामा दशैँ सम्म नै निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले काठमाडौं उपत्यकामा दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा भएको बैठकका क्रममा उनले दशैंसम्मनै निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने बताए। तिजको समयमा निषेधाज्ञा गरेकै कारण कोरोना भाइरस संक्रमण धेरै फैलिन नपाएको उल्लेख गर्दै उनले निषेधाज्ञा दशैंसम्म राख्नुपर्ने धारणा राखे।
“तिजको समयमा निषेधाज्ञा नभएको भए कोरोना भाइरस संक्रमणको वृद्धिदर अहिले भन्दा फरक हुन्थ्यो। त्यससमयमा निषेधाज्ञा जारी नगरिएको भयो बृद्धिद्धर व्यापक भएर जान्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।”, उनले भने,”दशैं आउँदैछ, केही सहजीकण गरेर भएपनि यसलाई दशैंसम्म राख्नुपर्छ होला ।”
कोरोना भाइरस संक्रमणको दर नियन्त्रणमा नआएका कारण निषेधाज्ञा एक हप्ता थप भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ४ गते देखि लागू गरिएको निषेधाज्ञादोस्रो २४ गते मध्यराति सम्मको लागि थपिएको थियो। यस अगाडी भदौ १० गते निषेधाज्ञा १७ गते सम्मको लागि बढाइएको थियो।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएपनि संक्रमण नियन्त्रणमा भने आएको छैन। उपत्यकामा अहिले दैनिक उच्च संख्यामा संक्रमित फेला परिरहेका छन्।
बिहान ११ बजे सम्म सबै प्रका`रका पसल खो`ल्ने व्यव_सायीको निर्णय !!
१५ दिनका लागि आवश्यक खाद्यान्न जोहो गर्न आग्रह
शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव, घर भाडा छुट गर्न माग !!!
बैङ्कका कर्मचारीलाई आजबाट सहजीकरण गरिने, फोटोसहितको परिचय पत्र अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने
अन्ततः निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय, भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी संचालन गर्न पाउने !